मन्त्री बनेर झण्डा हल्लाएर हिडेको के स्वाद भो जब जनता ठग्ने फटाहाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने ल्याकत छैन भने ? « News24 : Premium News Channel
मन्त्री बनेर झण्डा हल्लाएर हिडेको के स्वाद भो जब जनता ठग्ने फटाहाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने ल्याकत छैन भने ?
हामीलाई मात्र प्रत्येक दिन ५० वटा जती कल र इमेल वैदेशीक रोजगारीमा ठगीएकाहरुको आउँछ । जब गर्न केही नसक्ने हो भने किन खोल्ने श्रम मन्त्रालय ? मन्त्री बनेर झण्डा हल्लाएर हिडेको के स्वाद भो जब जनता ठग्ने फटाहाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने ल्याकत छैन भने । श्रम तथा रोजगार मन्त्री माननीय फरमुल्ला मन्सुर ज्यु १ दिन, मात्र १ दिन दिनभर अफिसमा बसेर वैदेशीक रोजगारी क्षेत्रका दलाल र माफियाहरु बारे आएका उजुरी र फाइल खोल्नुहोस त । सय जना भन्दा बढि ठगहरु प्रत्येक दिन जेल जान्छन् ।
तर त्यसका लागि तपाईले सहि ढंगले सहि काम गर्नु प-यो । काम गर्न नसक्ने तर मन्त्रीको इज्जत खोजीरहनुभएको छ भने गलतफहमीबाट बाहिर आउनुस् मन्त्री ज्यु । ज्वाई मन्त्री हुनु भयो भनेर ससुरालीले गर्व गर्ने मात्रै हो, जनताले गर्व गरेका छैन्न । जनता प्रत्येक दिन दलालको चंगुलमा परेर अर्काको देशमा अलपत्र परेर बलीन्द्र धारा आँशु झार्दैछन्् मन्त्री ज्यु, तपाई यतिबेला कहाँ कुन भेटघाट वा जमघटमा हुनुहुन्छ ? तपाईका परीवार,छोरा छोरीलाई २० औँ जनाले सुरक्षा दिइरहेका छन् होला तर जनताको छोराछोरी चाही बिरानो देशमा एउटा सानो कोठामा २० औँ जना कोचिएर बाँच्नु पर्ने ? १ मिनेट समय लिएर सोचि हेर्नुस, जनताले भोट दिएर तपाई कहाँको मान्छेलाई कहाँ पु-याइदिए अनि तपाई कहाका जनतालाई कहाँ पु-याउँदै हुनुहुन्छ ।
तपाई जनताको बारेमा सोच्दै सोच्नु हुन्न भन्ने म ठान्दीन तर जती सोचि रहनु भएको छ त्यती इनफ छैन । आज बेलुकाको भात, सरी तपाई त डिनर भन्नुहुन्छ क्यारे । आज बेलुका डिनर खाँदा पहिलो गाँस मुखमा हाँल्नु अघि विदेशमा अलपत्र पारिएका नेपालीहरुलाई सम्झीनुहोला र मन मनै सोच्नुहोला म जस्तो सामान्य मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिने जनताका छोराछोरीले आज के खाए होलान् ?
सिधाकुरा जनतासँग २०० भागमा प्रवेश: आज गोर्कण विष्ट र लालबाबु पण्डितसँगको विशेष कुराकानीसहित लाईभ आउने
बोक्सी भनि कुटपिट गर्नेलाई छाड्न लाउने मेयर लाईभमा, लाईसेन्सको खुला किनबेच (भिडियोसहित)